Antenimiera roa tonta : misy ny volavolan-dalàna ny amin’ny politika momba ny teny | NewsMada
“Ny toe-tsaina mihitsy no ilàna ny politika momba ny teny. Efa niakatra teny amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona izahay eto amin’ny Akademia. Ary efa eo am-pelatanan’ny filoha nifandimby teo ny politika momba ny teny amin’izao fotoana izao” hoy ny tale jeneralin’ny Foibe momba ny teny eny anivon’ny Akademim-pirenena, Rasoloarimalala Randriamamonjy Esther, momba ny volavolan-dalàna ny amin’ny politika momba ny teny izay efa napetraka eny amin’ny Antenimiera roa tonta.
“Tsy mora io tsy akory”, hoy izy. Tsy hoe hametrahana didy iray dia tsy maintsy miteny malagasy avokoa ny rehetra, na tsy maintsy atao amin’ny teny malagasy avokoa ny rehetra. Sarotra io satria 25 tapitrisa isika ankehitriny. Andrasana ny valin-teny hisian’ny fanantenana indray andro any.
Mbola tsy tena mahaleo tena isika
Takina hatrany ny politika momba ny teny. Tokony horesahina mialoha ny firafitry ny teny. Ny firafitry ny toe-tsain’ny Malagasy manerana ny Nosy no anisan’ny lehibe ao anatiny. “Revorevon’ny hoe azo ny Fahaleovantena isika, fa mbola tsy tena mahaleo tena raha tsy mivoaka io didy io”, hoy ihany izy.
Ny manahirana ny olona an-drenivohitra, indrindra ny any ambanivohitra, miady tany, miady lova: tena very rehefa miditra fitsarana. Tena manahirana ny teny frantsay ampiasaina amin’izany. Efa nahavita rakibolana momba ny fitsarana ny eo anivon’ny Tahala Rarihasina amin’ny foibe momba ny teny ao amin’ny Akademiam-pirenena. Saingy sarotra ny mamoaka boky haparitaka. Nefa efa misy ezaka sy dingana lavabe efa vita.
Izany rehetra izany, araka ny fanazavany, ho an’ny olona maka vadintany na miresaka amin’ny mpisolovava na ny mpiara-miasa any amin’ny fitsarana: samy nampitaina avokoa fa mba hatao amin’ny teny malagasy fa tsy fantatry ny maro manana ady eny amin’ny fitsarana. Tokony hisy fiaraha-miasa eo amin’ny fitsarana sy ny Akademiam-pirenena ny amin’izany.